Tips When you Write in English - Wall Street English
Tips When you Write in English
အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားရာတွင် သတိပြုသင့်သော အချက်များ
စာရေးသားရာမှာ သတိပြုရမယ့်အချက်တွေအများကြီးပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားရာမှာတော့ သတိပြု သင့်တာတွေက ပိုများပါတယ်။ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာရေးရတဲ့ essay, letter ကနေ စပြီး လုပ်ငန်း ခွင်ထဲမှာ ရေးရတဲ့ အစီရင်ခံစာ၊ အီးမေးလ်တွေအဆုံး ဘယ်လိုအင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားပဲရေးရေး သိ ထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်တစ်ချို့ကိုစုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာကောင်းကြောင်း၊ စကားလုံးကြွယ်ဝကြောင်းကို ပြချင်တဲ့အနေနဲ့ အလွယ်တကူဖတ် ရနားလည်ရခက်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေမသုံးဖို့အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးလိုက်တဲ့ စာ ဟာတစ်ဖက်သားက အလွယ်တကူနားလည်စေဖို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် အရမ်းရှုပ်ထွေးတဲ့စကားဆက်တွေအများကြီးနဲ့ရေးတာမျိုး အခက်ဆုံးစကားလုံးတွေကိုသုံး ပြီး ရေးပြတာမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်။
(၂) Quotes တွေ ဥပမာတွေ မသုံးပါနဲ့
စကားပြေအရေးအသားအဖြစ် တစ်ဖက်သားကို တင်ပြ ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကိုး အကား Quotes တွေကို တိုက်ရိုက်ရေးထည့်တာမျိုး၊ ဥပမေယျတွေသုံးပြီးရှင်းပြတာမျိုးဟာ အင်္ဂလိပ် လိုရေးသားရတဲ့ စကားပြေတွေမှာမသုံးသင့်ပါဘူး။
စာရေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် မေးခွန်းမေးမယ်ဆိုရင်လည်း သင့်ရဲ့မေးခွန်းကို စာဖတ်သူကတိုက် ရိုက်ဖြေဆိုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် Have you ever…? , What do you think about…? အစ ချီတဲ့မေးခွန်းတွေကို စာရေးသားတဲ့အခါမမေးမိအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လိုစာမျိုးပဲရေးရေး စာပိုဒ်လေးတွေခွဲပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အစီအစဉ်တကျရေးသားသင့်တာပေါ့။ ဒါမှ ဖတ်ရတဲ့သူက ရှင်း ရှင်းလင်းလင်းဖြစ်မယ့်အပြင် ရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းသဲသဲကွဲကွဲ ပြောပြလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာတစ်ပိုဒ်လုံးရဲ့အသက်ဟာ နိဒါန်းနဲ့နိဂုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ္ထုဖတ်ရင်တော့ တစ်အုပ်လုံးမဖတ်ဖြစ်ရင် အစနဲ့အဆုံးကိုတော့ လှန်ကြည့်ကြတာပဲမဟုတ်လား။ ဒီတော့ စာရဲ့အသက်ဖြစ်တဲ့ နိဒါန်းကိုဆွဲဆောင် မှုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြှင့်တင်သင့်သလို နိဂုံးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးအသားစွမ်းရည်မလျှော့သင့် ပါဘူး။
ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အခြေခံအချက် (၅) ခုနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးသော အင်္ဂလိပ်စာအရေးအသားတွေပိုင်ဆိုင် ကြပါစေကြောင်း Wall Street English က ဆုမွန်ခြွေလိုက်ပါတယ်။
Total English environment တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Wall Street English မှာတော့ အချိန်တိုအတွက် အင်္ဂလိပ် စာတိုးတက်ဖို့အတွက် သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ သင်လည်း Wall Street English သင်တန်းသားဖြစ်လို့ရတာပေါ့။ ဖုန်း